Tani waa 'Dhawaaqa codadka' ee macruufka cusub iyo iPadOS 15 | Wararka IPhone
Tani waa 'Dhawaaqa codadka' ee macruufka cusub iyo iPadOS 15
Angel Gonzalez | 22/06/2021 23:59 | macruufka 15, Casharrada iyo buugaagta
IOS iyo iPadOS 15 waxay gacanta ugu jireen horumariyeyaal dhowr toddobaad hadda qaab beta hore. Apple waqti dheer kuma qaadan doonto inay soo bandhigto beta-kii labaad kaas oo aan ku arki karno hagaajinta xasiloonida iyo ku darista wararka laga yaabo inay ku hareen dhuumaha muhiimka u ah WWDC 2021. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira shaqooyin kale oo badan oo cusub oo aan horey u soo aragnay. nala qabo, sida fursadaha cusub ee marin u helka ee iOS iyo iPadOS 15. Xulashooyinkaas cusub waxaan leenahay wicitaan Dhawaaqyada hore'taas oo, sida magaceeda ka muuqata, kuu oggolaanaysa inaad ku soo saari karto dhawaaq joogto ah asalka si aad u kordhiso feejignaanta oo aad u habeyso waqtiga.
Dhawaaqyada asalka ah, xulashada marin u helka cusub ee macruufka iyo iPadOS 15
Apple marwalba fiiro gaar ah ayey siisaa muuqaalada marin u helka ee cusbooneysiinta weyn ee nidaamkaaga hawlgalka. Waa hab lagu kordhinayo isdhexgalka barnaamijkaaga softiweerka ah iyo qalabka dadka naafada ah ee kaladuwan. Si kastaba ha noqotee, cusbooneysiintii ugu dambeysay waxaan aragnaa in Big Apple sidoo kale ay ku jiraan qalab marin loo helo oo ka gudbaya xuduudaha wixii ka dambeeya naafonimada laakiin loo maro xalliyaan nooc ka mid ah dhibaatada soo saarta isticmaale kasta xaaladaha qaarkood.
IOS iyo iPadOS 15 ma yarayn karaan oo mid ka mid ah xulashooyinkaan cusub ayaa ah wicitaan Dhawaaqyada hore. Sida magaceedaba ka muuqata, waxay noo ogolaaneysaa inaan si isdaba joog ah u soo saarno dhawaq iyadoo aan loo eegin waxa si isku mid ah uga dhawaajinaya codsiyada. Isticmaaluhu wuxuu ka dooran karaa dhawaaqa ay ka doonayaan kuwa la heli karo: buuq dheellitiran, buuq dhalaalaya, buuq mugdi ah, badweyn, durdur ama roob.
IOS 15 waxay sare u qaadaa shaqada 'jiididda iyo dhicida' iyadoo lagu darayo sawirro iyo qoraal
Si aad u dhaqaajiso, si fudud u gal ikhtiyaariyada marin u helka laga helo Qalabka qalabkaaga ee leh iOS ama iPadOS 15. Markaa dhagsii «Dhawaaqyada asalka». Goor dambe, waad hawlgelin kartaa hawsha oo waxaad dooran kartaa nooca codka aad rabto inaad ku ciyaarto gadaasha. Intaas waxaa sii dheer, waad kala habeyn kartaa codka si loo ciyaaro iyo haddii aan rabno inuu sidoo kale dhawaqmo marka barnaamijyada kale ay dhawaqa ciyaaraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Tani waa 'Dhawaaqa codadka' ee macruufka cusub iyo iPadOS 15
Liqitaanka AirPod waxay noqoneysaa shil soo noqnoqday
Garaacista Dr. Dre Powerbeats Pro oo leh qiimo dhimis 90 euro ah